Ekwentị: +86 57186162857
Cassettes nnwale ngwa ngwa COVID-19
Cassettes Nnwale Ọsọ na -efe Ọrịa
Ihe omume ụlọ ọrụ nke Hangzhou Fenghua Economic Promotion Association —- N'ime Tekno HEO
N'ehihie nke Ọgọstụ 15, Hangzhou Fenghua Economic Promotion Association nwere mmemme ụlọ ọrụ - batara na osote onye isi odeakwụkwọ "teknụzụ HEO" iji nwee ọmarịcha ụlọ ọrụ nke ihe ngosi na -apụta n'ọhịa nke teknụzụ biomedical. Hangzhou ...
Mutant Novel Coronavirus na -apụta n'ụwa niile
site na nchịkwa na 21-01-15
ka achọpụtara nje Covid 19 gbanwere na UK na njedebe nke afọ gara aga, ọtụtụ mba na mpaghara akọpụtala ọrịa nke nje na -agbanwe agbanwe achọtara na UK, na mba ụfọdụ achọpụtakwala ụdị dị iche iche nke nje na -agbagha. N'afọ 2021, ụwa ga -ebido ...
Ọtụtụ mba dị na European Union ewepụtala ọgwụ mgbochi COVID-19
site na nchịkwa na 21-01-01
Otu nwoke dị afọ 96 nke bi n'ụlọ ebe a na-elekọta ndị agadi na Spain abụrụla onye mbụ obodo nyere ọgwụ mgbochi megide coronavirus ọhụrụ. Ka ọ nyesịrị ọgwụ ahụ, agadi nwoke ahụ kwuru na onweghị ahụ erughị ala ọ bụla. Monica Tapias, onye nlekọta sitere n'otu ụlọ ebe a na -elekọta ndị agadi nke mechara gbaa ọgwụ mgbochi ...
Otu ụbọchị iji wuo otu ọgbakọ
site na nchịkwa na 20-12-31
Iji mee ka ndụ ndị ọrụ ha ka mma, belata nrụgide ọrụ ha, ma nye ha ohere izu ike kpamkpam mgbe ọrụ gachara, Hangzhou Hengao Technology Co., Ltd. haziri ọrụ ụlọ otu na Disemba 30, 2020, yana ndị ọrụ 57. ụlọ ọrụ ahụ sonyere na ọrụ a. Afọ ...
Ọ ga -abụ mgbanwe corona virus
site na nchịkwa na 20-12-28
A kọwo ọrịa coronavirus ọhụrụ na England, South Africa na Nigeria kemgbe ọnwa Disemba. Ọtụtụ mba gburugburu ụwa zara ngwa ngwa, gụnyere machibido ụgbọ elu si UK na South Africa, ebe Japan kwupụtara na ọ ga -akwụsị nnabata ndị ala ọzọ malite na Mọnde. Dị ka ...
Atụmanya nke ụlọ ọrụ IVD
site na nchịkwa na 20-12-24
N'ime afọ ndị na -adịbeghị anya, ụlọ ọrụ nyocha ọrịa in vitro (IVD) nke ụlọ etoola ngwa ngwa. Dabere na data wepụtara MedTech wepụtara, site na 2014 ruo 2017, ọnụ ahịa ahịa ahịa nke ụlọ ọrụ IVD amụbaala kwa afọ, site na $ 49 ijeri 900 nde na 2014 ruo $ 52 ...
Kedu ihe dị iche n'etiti nje corona ọhụrụ na influenza
site na nchịkwa na 20-12-23
Ka ọ dị ugbu a, ọnọdụ ọrịa ọhụrụ zuru ụwa ọnụ na -adị otu otu. Mgbụsị akwụkwọ na udu mmiri bụ oge oke ọrịa ọrịa iku ume. Okpomoku dị ala na -enyere aka ịlanarị na mgbasa nke nje corona ọhụrụ na nje influenza. Enwere ihe ize ndụ na n ...
Atụmatụ maka ịchọpụta ọrịa na -efe efe
site na nchịkwa na 20-12-22
A na -enwekarị ụzọ abụọ maka ịchọpụta ọrịa na -efe efe: ịchọpụta nje n'onwe ya ma ọ bụ nchọpụta ọgwụ mgbochi nke ahụ mmadụ na -emepụta iji guzogide nje ahụ. Nchọpụta nke nje nwere ike ịchọpụta antigens (na -abụkarị protein dị elu nke nje, ụfọdụ na -eji ...
Ụlọ 201, Building 3, Nke 2073 Jinchang Road, Yuhang District, Hangzhou, China
Tel: ivy +008618157136026 Tel: vic +008613738091655 Tel: betty +008615168459686